Habibiana… : tovovavy roa naolana sy novonoina hita faty teny Ankatso | NewsMada
Habibiana… : tovovavy roa naolana sy novonoina hita faty teny Ankatso
Par Taratra sur 30/12/2016
Habibiana tsy roa aman-tany! Vehivavy roa, manodidina ny 25 taona eo no hita faty teny amin’ny faritry ny oniversite Ankatso II, omaly vao maraina tokony ho tamin’ny 5 ora teo. Nisy nanolana izy roa, ary novonoina avy eo. Afakomaly hariva nahitana azy ireo farany, ary izao maty izao…
Nandriaka ny ra, potika ny tava, feno ratra ny loha sy ny vatany, niboridana ny tapany ambany… ireo vehivavy roa nivalampatra efa tsy nisy aina intsony somary tanaty kirihitra. “Naolana ireo vao novonoina”, hoy ny fanazavana.
Nisy mifanohitra ihany ny petrakevitry ny mpitandro filaminana teny an-toerana sy ny filazan’ny olona satria, nilaza ny polisy fa novonoina tany an-toeran-kafa ireo izay vao nariana teny an-toerana ny razana. Nambaran’ny mponina anefa fa nahitana kapaoty nampiasaina maromaro teo an-toerana. Izany hoe mety teny mihitsy ny nanatanterahina ny fanolanana sy ny famonoana ireo tovovavy ireo.
Araka ny fanazavana avy amin’ny mpiambina eny amin’ny oniversite, tamin’ny 5 ora maraina izy ireo no nisy niantso fa misy fatin’olona iray eny Ankatso II, tsy lavitra ny fonenan’ny mpianatra. Rehefa nihazakazaka nihazo teny ny mpiambina vao hita indray ilay tovovavy faharoa. Voalaza fa tsy mpianatry ny oniversite ireo mpianatra ireo. Nisy olona teny an-toerana niteny avy hatrany fa mponina eny Ambolokandrina ireo. Ny sefom-pokontany kosa nanambara fa tsy ao anatin’ny lisitry ny mponina iadidiany ireo. Ny hafa niteny fa monina eny Ambatomaro ny iray.
Niala tao aminy tamin’ny 7 ora hariva
Vehivavy iray nilaza fa zandrin’ny iray tamin’ireo maty nisy namono no nilaza fa afakomaly hariva no niala tao an-tranony ny zokiny. “Nifanao fotoana tamin’ny namany izy niala tao an-trano. Tsy mahalala ny namany izahay. Manan-janaka roa izy ka ny maraina nanontany an-janany izahay rehefa nahita azy tsy nody. Tsy fanaony mihitsy izao. Tsy misotro toaka izy”, hoy ny fanazavana. Ilay tovovavy faharoa kosa tsy nisy nahafantatra.
Eo am-pelatanan’ny polisin’ny BC ny raharaha. Toe-javatra mampihoron-koditra loatra ity nitranga teny Ankatso, tao amin’ny faritry ny oniversite ity. Tsy vao omaly akory no nitrangan’ny toe-javatra tahaka izao, fa efa nisy indray taona. Mpianatry ny sosiolojia maty nisy nanolana sy namono tao amin’ny faritry ny oniversite. Maromaro zava-nitranga tahaka izany. Hatreto anefa, tsy nisy ny vokany azo tsapain-tanana tamin’ny famotorana nandeha. Mety ho hita ve ny marina amin’ity tranga farany ity? Iza no nahavanon-doza?
Ny fepetra raisina mifanaraka amin’ny toe-javatra tahaka izao eny amin’ny oniversite somary goragora. Toy izany koa ny ray aman-dreny amin’izao fety izao amin’ny zanany vavy, na lahy ihany koa aza. “Samia mailo sy hentitra amin’ny fanaraha-maso”, hoy ny mpitandro filaminana.